जसपा फुट्दैन जे निर्णय गरे पनि एक ढिक्का भएर गर्दछ-डा. झा – Sajha Pati
जसपा फुट्दैन जे निर्णय गरे पनि एक ढिक्का भएर गर्दछ-डा. झा
डा. सुरेन्द्र झा जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । जसपा भित्र एक बौद्धिक र तार्किक नेताको रुपमा चिनिनु हुने झाले जसपा नेपालको भविष्य सुनौलो रहेको दाबी गर्नु हुन्छ । अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक तरलताको कारक तत्व नेकपा भएको बताउनु हुने झाले यसमा केपी ओली,पुष्पकमल दाहाल,माधव नेपाल र झलनाथ खनालको उत्तिकै दोष रहेको बताउनु हुन्छ । जसपा भित्र अहिले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने बिषयमा छलफल नभएको बरु महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुले रेशम चौधरी लगायत जसपाका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता, अंगभंग भएकाहरुको निम्ती भरणपोषण, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरण, संविधान संसोधनका निम्ती आयोग गठन लगायतका विषयमा सरकारसँग छलफल गरेको र त्यसको प्रकृया अगाडी बढेको बताउनु हुन्छ । स्पष्ट बक्ता एवं बौद्धिक नेता झासँग समसामयिक राजनीतिक बिषयमा गरिएको कुराकानी :
यहाँहरुको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी भित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ, एकता भएको वर्ष दिन नपुग्दै पुन पार्टी फुट्ने भयो भन्ने समाचारहरु पनि आईरहेका छन नि वास्तविकता के हो ?
तपाईले प्रश्न गर्नु भए जस्तो हल्ला वा समाचारहरुमा कुनै सत्यता छैन । यि सबै निराधार हल्ला हुन । जनता समाजवादी पार्टी २००७ सालको क्रान्तिदेखि अहिले सम्मका जति पनि मुख्य मुख्य क्रान्तिहरु भएका छन ती सबैको समायोजनबाट बनेको पार्टी हो । हाम्रा पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष सहित पाँच जनाको जुन हाई कमाण्ड छ, त्यो नेतृत्व भनेकै मुख्य आन्दोलनहरुको संकेन्द्रियकरण हो । हामीले पार्टी एकता गर्दानै बैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाउने भनेर पार्टी एकता गरेका हौं । हामीले पार्टी एकता गर्दा कुनै सर्त राखेर एकता गरेका थिएनौ । हामी मिल्नु पर्दछ भन्ने भयो मिल्यौं । हो हाम्रो सामु प्रदेश दुईको सरकार टिकाई राख्ने चुनौती थियो । त्यसलाई टिकाउने कुरा अवश्य थियो । तर अरु दलको सरकार टिकाई दिन हाम्रो एकता भएको होइन । हामी फुट्ने त कुरै छैन । दुई पार्टी बिच समायोजनको प्रकृया जारी छ । प्रकृया केही ढिलो गतिमा बढेको छ । तर अगाडी भने बढीनै रहेको छ ।
तपाईहरुले एक वर्ष अघि पार्टी एकता गर्दा रातारात गर्नु भयो, कतिपयले त समाजवादी पार्टीको फुट बचाउन छिमेकी राष्ट्र भारतको इसारामा रातारात एकता भयो विचार सिद्धान्तबारे खासै छलफल भएन अहिले पार्टी फुटाउन पनि उतैको चलखेल छ भन्ने पनि छन् नि ?
यो भनाईमा सत्यता छैन । हामीले रातारात पार्टी एकता गरेका पनि होइनौ । पार्टी एकता हुनुपुर्व दुई पार्टी बिच आठ महिनादेखि लगातार वार्ता सम्वाद भइरहेको थियो । त्यसअघि निर्वाचनमा जाँदा प्रदेश दुईमा हामी तालमेल गरेरै गएका थियौं । जनताको चाहना पनि यी दुई पार्टी मिल्नु पर्दछ भन्ने थियो । मलेठ घटना पछि ६ वटा पार्टी बिच एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनायौ । त्यो बेला तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम एकतामा आउन सकेन । राजपासँग एकता नभए पनि फोरमको अन्य दलसँग एकता प्रकृया चलिरहकेकै थियो । उहाँहरुले तत्कालिन संघीय समाजवादी जसको नेतृत्व असोक राईले गर्नु भएको थियो । उहाँहरुदेखि अरु विभिन्न दलसँग एकता गर्दै पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नु भएको नयाँशक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टी बनाउनु भएको थियो ।
पहिचान र संघीयताको पक्षधर पार्टी बिच एकता गर्दै समाजवादी पार्टी बनेको थियो । यही विचमा गतवर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्यायो । त्यो सँगै संवैधानिक आयोग सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्यायो । यो विधेयक आएपछि एकता छिटो गर्न वातावरण बनाएको हो । त्यसैले कुनै छिकेकी राष्ट्रले चाहेर एकता भयो अब उस्ले चाहँदा फुटाउँछ भन्नेमा कुनै सत्यता छैन । एकता होस भन्ने सद्भाव हुनसक्छ । फुटाउने कमजोर बनाउने भन्ने त कसैले पनि गर्दैन ।
जतिबेला यहाँहरुले पार्टी एकता गर्नु भयो, त्यसबेला बैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने भन्नु भएको थियो, तर अहिले त यहाँहरुको व्यवहार पनि अन्य दलकै जस्तो देखियो, कसैले सरकारमा जाने भन्ने कसैले नजाने भन्ने बिचार सिद्धान्त भन्दा आफ्नो फाईदा हेर्ने प्रबृत्ति बढेको देखियो नि ?
हाम्रो पार्टी जसपा नेपालको शिर्ष नेतृत्वमा जोजो नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु विगत पचासवर्ष, तीसवर्ष देखि कम्तीमा पन्ध्र बिस वर्ष विशिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु राज्य संञ्चालन गर्ने नेतृत्व तहमा पनि पुग्नु भएको छ । उहाँहरुको क्षमता राज्यको रुपान्तरणमा प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने छ । हामीले जसपालाई बैकल्पिक शक्ति बनाउने हो भने शिर्ष नेतृत्वको अनुभव र क्षमता छदैछ अब त्यसमा नयाँ टिम जोडेर अगाडी बढ्नु पर्दछ । शिर्ष पाँचजना नेता रथको अगाडीको घोडा हुनु हुन्छ । अब त्यस पछिका नेताहरु जो चाहे मधेस आन्दोलनबाट दिक्षित शिक्षित हुनुहुन्छ कोही जनयुद्ध वा थरुहट आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनबाट दिक्षित हुनुहुन्छ । अब उहाँहरुलाई रथको रुपमा लिएर अगाडी बढ्नु पर्दछ । अहिले पाँच जना नेताहरु मात्र बसेर निर्णय गर्ने परिपार्टी छ ।
हामीले दबाब दिएर त्यसलाई केन्द्रीय कार्यकरणी समिति सम्म ल्यायौं । यस्लाई अझबढि ठुलो निकाय लानु पर्दछ । छलफल केन्द्रीय समितिमा लगेर गर्दा अझ उचित हुन्छ । कहिले काँही समस्या आउँदा अझ ठुलो तप्कामा जानु पर्दछ । यस्मा हाम्रा नेताहरुको ध्यान पुग्नु पर्दछ । त्यस्तै अर्को कमजोरी कहाँ पनि देखिएको छ । भने हामी विगतमा जुनजुन पार्टीबाट जसपामा आयौं अहिले पनि पुराना पार्टी र साथीहरु प्रतिको मोह कायमै रहेको देखिन्छ । म राजपा हुनु पुर्व तमलोपा त्यसअघि काँग्रेस थिए, अब अहिले जसपाको नेता हुने तर चिन्ता काँग्रसको गरे भने के हुन्छ ? भन्नुको मतलव हाम्रोमा कोही लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको हुनुहुन्छ कोही ¥याडीकल कम्युनिष्टबाट आएका हुनुहुन्छ । कोही अंहिसावादी आन्दोलनबाट आएका हुनुहुन्छ । अब पुरानो पार्टी गुटको मोह होइन जसपाको मोह गर्नु पर्दछ । जसपामा ठुलो समस्या पुरानो स्कुलिङ छाड्न नसक्नु पनि हो । अब पुरानो मोह होइन जसपा भएर सोच्ने हो भने हामी बैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छौ । महन्थ ठाकुर ५० वर्षदेखि प्रजातान्त्तिक आन्दोलन रहनु भएका नेता प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राजेन्द्र महतो ३० वर्षदेखि मेधस आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई,असोक राई जस्ता नेता हुनुहुन्छ । त्यस्तै राजेन्द्र श्रेष्ठ अनिल झा जस्ता धेरै अरु नेता पनि हुनु हुन्छ । दोस्रो तहका नेता पनि एकसे एक हुनुहुन्छ । मुस्ताङदेखि मधेस बुझेको दाङदेखि दिल्ली बुझेको नेता चाहिन्छ भन्ने हो । हामी बिच केही चुनौती भए पनि सम्भावना बढी छ । त्यसैले मैले त सुनौलो भविष्यको कल्पना गरेको छु । जसपा बैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्न सक्छ ।
दोस्रो तहका नेतालाई अगाडी बढाउन त पदाधिकारीको चयन गर्नु पर्ने त्यही गर्न सकनु भएको छैन किन होला ?
विगतमा हाम्रा नेताहरुका अलग अलग पार्टी थिए । ती पाटी एक किसिमले प्रा.लि जस्तै थिए । पुर्व १३/१४ वटा पार्टी मिलेर जसपा बन्यो । पुर्व पार्टीमा पार्टीका नेता र उनका छोरा,छोरी, ज्वाई यस्तै आफन्त मिलेर खोलेका थिए । त्यहाँ छलफल बहस गर्ने, प्रश्न उठाउने काम हुने थिएन । त्यहाँ अवसरको भावबण्डा पनि सहि रुपले हुने थिएन । खर्चहरु पनि पारदर्सी थिएनन । महाधिवेशनमा पनि धेरै छलफल हुने थिएन । हिजो जे भए पनि अब भने जसपा जनताको पार्टी बन्यो,यस्लाई अब आम जनताले वार्दलीबाट हेर्दै छन् । तपाईले पदाधिकारी किन बनेन भन्नु भयो । पदाधिकारी चयन गर्ने पार्टीलाई सिस्टममा लाने र समावेसी पार्टी बनाउने हो भने त विगतमा जस्तो एप्सुलेट अथोरोटी प्रयोग गर्न पाईदैन । सायद त्यही भएर नगर्नु भएको हो । तर अब सिस्टममा जानुको विकल्प छैन । सिस्टममा नचल्ने हो भने त पार्टीनै कोल्याप्स हुन्छ । यहाँ रेल्वे स्टेसनमा रेल कुरे जस्तै त कोही बस्दैनन । अवसर नपाएपछि त अन्त जान्छन । त्यसैले अब शक्तिको बाँडफाड गरी सामूहिक निर्णयमा चल्ने परीपाटीर्को विकास गर्नु पर्दछ ।
जसपाले सुरुमा त संविधान संसोधन, समावेशीता, संघीयताको कुरा विशेष रुपमा उठाएको थियो अहिले त्यसमा कम ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ किन होला ?
हामीले अहिले जुन राजनीतिक समस्या उब्जिएको छ । यस्मा यो वा त्यो भन्दा पनि सिङ्गो नेकपा असफल भएको हो भन्ने ठान्छौ । यस्मा कोही कम दोषी कोही बढी दोषी भन्ने छैन । जति दोषी केपी ओली हुनुहुन्छ । त्यति नै दोषी प्रचण्डजी,माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिले जुन तरल अवस्था देखिएको छ । यो जसपाको निम्ती ठुलो अवसर हो । एउटा त पुराना पार्टीले गतिलिन सकेका छैन । नेपाली काँग्रेस नेता व्यवस्थापनमै रुमलिएको छ । निती र नेतृत्वबारे काँग्रेसमा छलफल छैन । अर्को तर्फ नेकपा पुर्ण असफल भयो । जसपा अनुकरणीय छबि र नेतृत्व क्षमता भएका नेताको पार्टी हो ।
पुर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अनुकरणीय नेताहरु महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव जस्ता नेता जसपामा हुनुहुन्छ । अहिले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपाल सरकार अर्थात केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग वार्ता गरीरहनु भएको छ । उहाँले त्यहाँ थरुहट आन्दोलनका एजेण्डाबारे कुरा राख्नु भएको छ । हाम्रा १२ सय भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाएको छ । ती खारेजी अंगभंग भएकालाई भरणपोषण, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक संविधान संसोधनबारे पुनरावलोकन कमिटी बनाउने जस्ता कुरा सरकारसँग भईरहेका छन् । यी एजेण्डामा सबैभन्दा अनुदार व्यक्ति केपी ओली पनि अहिले सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले एजेण्डा छाडेको होइन एजेण्डा राख्ने र पुरा गराउने अवसरको रुपमा अहिले अवस्थालाई लिएका छौ । नकि सत्तामा जाने कुरालाई । अहिले सरकारमा जाने कुरामा भन्दा हाम्रो एजेण्डामा छलफल भएको छ । केही मुद्दा फिर्ता लिने त मन्त्री परिषदले निर्णय गरी सकेको छ ।त्यसैले एजेण्डा छाडेका छैनौ झन गहन रुपले उठाईरहेका छौं ।
अहिले मिडियाहरुमा केपी ओलीको सर्मथनमा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रचण्डको समर्थनमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भन्ने पनि आएको छ नि ?
यो त जसपा भित्र खेल्न खोज्नेको कुरा हो । जुन दिन केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक वार्ता भयो, त्यस दिन बाबुराम भट्टराई अस्वस्थ हुनु हुन्थ्यो । उहाँ बाहेक दुवैजना अध्यक्ष सहित चारैजना शिर्ष नेता प्रमसँगको वार्तामा जानु भएको थियो । सम्वाद जे भयो सबैकै सामु भयो । जहाँसम्म बाबुरामजीको कुरा छ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भने पछि उक्त गठबन्धनबाट प्रम बन्ने कुरा त खारेजनै भयो । अर्को कुरा केपी शर्मा ओलीले जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुस मैले समर्थन दिन्छु भन्नु भएको पनि छैन । भन्नु भयो भने े त्यसमा के आपत्ति भयो । समर्थन दिन्छु भनेर उहाँले भन्नु भएको छैन भन्नु भयो भने त्यो जसपाको निम्ती अवसर हो । केपी ओली इतरको गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने छ तर काँग्रेसले निर्णय आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने ग¥यो ।
काँग्रेसले जुन निर्णय ग¥यो यो त गठबन्धनकै मान्यता बिपरित हो । उहाँकै नेतृत्वमा किन बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अथवा उहाँकै नेतृत्वमा बनाउने भए पनि त्यो सामूहिक छलफलबाट टुङ्ग्याउनु पर्दथ्यो । यदि कसैले जसपालाई सरकारको नेतृत्व गर्नुस भने एकसे एक नेता हुनुहुन्छ । तर यो कुनै नेताले भनेर हुँदैन । केपी ओलीले त्यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय हुनु प¥यो । काँग्रेस वा माओवाी केन्द्रले गर्ने हो भने उहाँहरुले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय वोर्डमा निर्णय गरी हामीलाई पत्र पठाउनु प¥यो । त्यो भएको छैन । हामी आफै दाबी गरौ हामी चौथो दल हौं । अर्कोतर्फ हामी अहिले सरकारमा जाने भन्दा हाम्रा एजेण्डा स्थापित गर्ने बिषयमा केन्द्रीत छौं । सरकारको नेतृत्व वा सहभागिता प्राथमिकतामा छैन । अहिले विवाद छ भन्ने कुरा जसपामा खेल्न चाहनेको दुस्प्रचार हो । जसपाले जे निर्णय गर्दछ त्यो एक ढिक्का भएर गर्दछ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले आ—आफ्ना बिचार आउन सक्छन तर निर्णय गर्दा हामीले एक ढिक्का भएर गर्दछौं ।
भावी दिनमा कसरी अगाडी बढ्नु हुन्छ ?
जसपासँग मुलुकको नेतृत्व लिनसक्ने सम्भावना र अवसर छ । यसलाई क्यास गर्नु पर्दछ । ढिलोचाँडो हामी जनताको विचमा जानु पर्दछ । जसपाको नेतृत्व हिमाल पहाड तराईको इन्द्रेणी बन्नु पर्दछ । जसपामा विविधता छ । नेपालमा सबै जात क्षेत्रका अलग अलग समस्याहरु छन । यी सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय समस्याको रुपमा उठाई अगाडी बढ्नु पर्र्ने हुन्छ । हाम्रो मुलकको गर्व गर्न लायक इतिहास छ । यसलाई बचाउँदै,राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउँदै समावेशी संमृद्ध मुलुक बनाउनु पर्दछ । नेपाली जनताले एक पटक जसपालाई भोट दिनु हुन्छ हामी कायलपलट भन्दैनौ तर मुलुकको योजनाबद्ध विकास गर्दछौं । सरकारले जनतालाई दिने भनेको स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा हो । त्यो हामीले दिन्छौ अनि मुलुकलाई आधुनिकिरण गरी विकासको नयाँ उचाई पुराउँछौं ।
पार्टी एकता भएको एक वर्ष भयो समायोजन प्रकृया कहाँ पुग्यो त ?
समायोजनको निम्ती कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले द्रुत रुपमा आफ्नो काम गरीरहेको छ । मैले त अलि फराकिलो तरीकाले सोच्दछु । जसपा भनेको ११÷१२ वटा घर मिलेर बन्ने घर हो । अब ति सबै घरमा भएका राम्रा निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी नयाँ र मजबुत घर बनाउनु पर्दछ ।
म विगतमा कहाँ थिए भन्ने सोच्ने विगतकै आफना व्यक्ति स्थापित गर्नु पर्दछ भन्ने मनोविज्ञान त्यागी असल मान्छेहरुलाई उचित स्थान दिनु पर्दछ । जसपा अहिले टेण्टमा छ । सानो हावाहुरीले उडाउन सक्छ । अब यस्लाई घर बनाउनु पर्दछ । जसपा रुपी घरको जग बलियो बनाउन वडा कार्यालय देखि केन्द्रसम्म समायोजन गरी उचित व्यक्ति उचित जिम्मेवारी दिएर अगाडी बढ्नु पर्दछ । यसो भयो भने जसपा एउटा नयाँ घर बन्द जसमा सबै नेपाली ओत लाग्न सक्छन् ।
कुनै समस्या परे मेयर, उपमेयरसहित जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत नम्बरमा सम्पर्क गर्नोस् : मेयर शाक्यको अपिल
करी पातले प्रतिरोध क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ : करी पात प्रयोग र फाइदाहरु